टमाटरको सहायताले गायब हुन्छ तपाईको अनुहारको अनावश्यक रौँ, जान्नुहोस् यसको जादुई फ्रमुला – Krazy NepaL
टमाटरको सहायताले गायब हुन्छ तपाईको अनुहारको अनावश्यक रौँ, जान्नुहोस् यसको जादुई फ्रमुला
March 25, 2021 2889
काठमाडौँ । अनावश्यक रौँबाट छुटकारा पाउनका लागी महिला धेरैजसो वेक्सिङ्ग को सहारा लिन्छन् । तर धेरै महिलाहरुलाई घरमा नै वेक्सिङ्ग गर्न र बनाउन आउँदैन ।यस्तो अवस्थामा महिलाहरु ब्यूटी पार्लरमा जान्छन्। ब्यूटी पार्लरका जानुमा दुई प्रमुख समस्याहरू छन्। पहिलो यहाँ जान धेरै महँगो छ र दोस्रो त्यहाँ यति धेरै भीडहरू हुन्छ कि त्यहाँ गई वैक्सिङ्गको लागि पर्खनु भनेको समयको बर्बादी हो। ध्यान दिनुहोस् आज हामी तपाईंलाई घरमा तपाईंको अनुहार वा शरीरको अनावश्यक कपाल हटाउ उपाय भन्नेछौं।
टमाटरबाट अनावश्यक अनुहारको र शरीरको रौँ यसरी हटाउनुहोस्
आज हामी अनावश्यक अनुहारको रौँ हटाउन टमाटर र केही अन्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्नेछौं। यस नुस्खाको खास चीज यो हो कि यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन र यसले तपाईंको छालालाई हानी गर्दैन। अनावश्यक रौँ हटाउनका लागि तपाईले टमाटर प्याक तयार गर्नुपर्नेछ।
यसलाई तयार पार्न तपाईलाई चारवटा चीज चाहिन्छ। टमाटर, कच्चा दूध, मह र जिलेटिन पाउडर। सबै भन्दा पहिले, मिक्सरमा दुईदेखि तीन टमाटर पीस्नुहोस् र यसको जुस तयार पार्नुहोस्। यदि तपाईंले यस जुसलाई चाल्नुभयो भने यो उत्तम हुनेछ।
अब एउटा धातुको भाँडो लिनुहोस् र यसमा दुई चम्चा टमाटरको जुस, एक चम्चा दूध, एक चम्चा मह र एक चम्चा जिलेटिन पाउडर मिलाउनुहोस्। यी सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेपछि, तपेस जस्ता यस धातुको ठूलो भाँडोमा पानी तताई राख्नुहोस्।
जब पानी उमालिन्छ, ग्यास बन्द गर्नुहोस् र उमालेको पानी तपेस भित्र कचौराको साथ मिश्रण राख्नुहोस्। त्यो हो, मिक्सिंग कचौरामा पिसेको सामाग्री यस उम्लेको पानीमा माथि तैरिरहनेछ। यसलाई डबल उमाल्ने प्रक्रिया भनिन्छ। यस प्रक्रिया मार्फत, तपाईंको मिश्रण र जिलेटिन पग्लिन्छ।
जब यो मिश्रण राम्रोसँग पग्लन्छ, यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस् र यसलाई ब्रशको सहायताले अनावश्यक रौँमा लगाउनुहोस्। यो सुख्न नछोडेसम्म यसलाई रहन दिनुहोस्। सुकाएपछि, यो विपरीत दिशाबाट हटाउनुहोस्। तपाईको शरीरको अनावश्यक रौँ यस प्याकको साथ बाहिर आउँदछन्। यस प्रकारले तपाईंको छाला पूर्ण रूपमा चमकदार हुनेछ।
Prevआज १२ चैत्र बिहिवार २०७७ निकै राम्रो छ हेर्नुहोस् राशिफल
Nextयी हुन् १५ मिनेटमै अनुहारको चमक बढाउने उपाय
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेका पुरुषको जब डक्टरले जाँच गरे, डाक्टर नै तर्सिए
केवल ज्व’रो मात्र होइन, यी ३ ल’क्ष’ण देखियो भने पनि को’रो’ना हुन सक्छ, हेर्नुहोस्…
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45445)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24050)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18606)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (16823)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (15009)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13935)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (13015)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12981)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12869)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12454)
तेज दिमाग भएको सन्तान चाहानुहुन्छ ? गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी खाना समावेश गर्नुहोस् !
सपनामा महिलालाई देख्नुहुन्छ ? यस्ता मिल्छ शुभ अशुभ फल
मंसिर २६ देखि पुस ३ सम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस
आज मंसिर २६ गते आइतवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल